Eto ianao : Home>Momba anay>Company Profile
Sunrise Chemical Industrial Co., Ltd (Shanghai Yusheng Sealing Material Co., Ltd) dia orinasa avo lenta amin'ny alàlan'ny orinasa ISO9001-2015 izay manam-pahaizana manokana momba ny fikarohana sy mamolavola ny fampiharana ny teknolojia adhesive sy sealing. Tsy vitan'ny fandrosoana fotsiny izahay amin'ny famokarana patezika, fa koa iray amin'ireo mpanamboatra foibe PU lehibe indrindra any Chine. Ny fahitan'ny orinasa dia ny fananganana marika manerantany ary ho lasa fototry famokarana adhesive manerantany.
Sunrise Chemical Industrial dia miorina amin'ny famokarana haingam-pandeha maoderina roa ao amin'ny faritanin'i Shanghai sy Shandong, any Sina, mitahiry faritra 70,000 metatra toradroa ary miaraka amina famokarana mandeha ho azy tanteraka avy any Eropa.
Sunrise Chemical Industrial dia mitantana ny famokarana famokarana sy rafitra fanamafisana ny kalitao. Nahazo fanamarinana rafitra kalitao ISO 9001-2015 izahay. Amin'ny maha mpitarika anay amin'ny tsena sy ny foza PU, voaporofo isika fa afaka manome ny mpanjifany vokatra sy serivisy kalitao tsy miovaova.
Ny marika Sunrise Chemical Industrial "SUNRISE" dia nahazo laza malaza ary fahatsiarovan'ny marika amin'ny indostria taorian'ny fananganana efa ho 20 taona. Ny vokatrao dia nandrakotra faritra samihafa amin'ny fampiharana, toy ny fananganana, ny fandravahana trano, ny singa elektronika, ny fanamboarana fiara, ny fitaterana lalamby, sns., Ny alàlan'ny SUNRISE PU dia nitahiry ny tsangambato avo lenta.
Ny vokatra SUNRISE dia amidy manerana an'izao tontolo izao amin'ny firenena mihoatra ny 50, toa an'i Alemana, Etazonia, Russia, Japan, Korea Atsimo, India ary Dubai. Ampiasaina be dia be amin'ny tetikasa lehibe maro izy io, toy ny Beijing National Sports Center, foibe ara-kolotsaina EXPO, Jinmao Tower, Tomson Riviera, Graces Villa, Star River, Pudong International Airport, Ivontoerana ara-bola iraisam-pirenena ao Beijing, Citibank ary trano federaly rosiana, ary nahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifa.
Manantena izahay ny hanangana hoavy tsara kokoa momba ny indostria simika miaraka aminareo, ry namako malala.